Dee D o e: December 2009
Posted by ဒီးဒိုး at 12:02 PM No comments:
မင်းပြောတော့ သိပ်ချစ်တယ် တဲ့.......................
မနေ့ဒီနေ့ဘယ်လို ခွဲ မလဲ
ှနှစ်ဖို.ရန် မင်းရဲ. နွံ ကို ဘဲ လိုက်ရှာ နေသူ.............................
နာရီ အို အချိန်မှန် နေဆဲ ဆိုပေမယ့်
အိမ်ပြန်ဖို. လမ်းရယ် မမြင်..
မင်းရဲ.နွံအိုင် ငါ့ရဲ.ကောင်းကင်
မီးကို ဘဲ တိုးတော့ မှာပေါ့...
ဆံကေသာ တပွင့်ပန်း ပန် မှာ မဟုတ်
အချစ်ကို လူတိုင်း နဲ့ခံစား နိုင် တယ် တဲ့လား
ချုံပုတ်ထဲ ကကြက် ထက်
လက်ထဲက ကြက်ဥ ပိုတန်ဖိုး ကြီး
ဒါဆို ငါ့ ခံယူ ချက်မှားနေ တာ များလား..
ပြန်ပါ ပြန်ပါ အကြိမ်ကြိမ် ပြောတုန်းက
ဒီအပင် အို အခက်အလက် မရှိဘူး
ဒီလိုလွတ်လွတ် လပ်လပ် နေချင် တာဆို..
ဟိုကောင်းကင် မင်းအဖော် ကောင်းလို့ 
နာရီတွေ ရပ်တန့် ပစ်
ပင်လယ်တွေ မှောက်ကာသွန် ပစ်
ကောင်ကင် ကို မီးတက်ရို.ပစ်
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကိုင်လှုပ် ပစ်
ဒေါသတွေ လှိုင်လှိုင် ထွက်ပေမယ့်
ယောက်ကျားတွေနဲ. ရင်ဘောင် တန်းနိုင်တယ် တဲ့လား.....................
တံခွန်မရှိ တဲ့ ရထား
လင်မရှိ တဲ့ မိန်းမ ဆို တဲ့ စကား ပုံ
ရိုက်ချိုး ပြစ်မယ် တဲ့လား....
မင်းရဲ.အိပ်မက်တွေ မှန်ကန် လာဖို.
Posted by ဒီးဒိုး at 9:54 AM No comments:
Posted by ဒီးဒိုး at 8:57 AM No comments:
စောက်ရူးမ လေး နဲ. ကျွန်တော် စောက်ရူး....
စောင့်နေတဲ့ ငါ့ ကို သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်တယ်
စောက်ရူး ငါ က
မင်းကို သေမလောက် ချစ်တော့
မင်းကို ခေါ်ချင်တယ် စောက်ရူးမလေး လို့ 
ငါရင်ခွင် မှာ ခိုဝင် ပြီး
မင်းရဲ.ချစ်ဟောင်း လွမ်းလှချည် ရဲ.
ကိုးရီးကား ကြည်. ပြီး
east coat ကမ်းခြေ သောင် ပြင်မှာ
east coat ကမ်းခြေ သက်သေ ရှိတယ်..
သက်သေ ရှိကြောင်း ပြောရတဲ့ အကြောင်း က
မင်း ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်လို့ .........................................
ဘ၀ရဲ. အကောင်းဆုးံနေထိုင် နည်း တွေ ပြောပြီး
ပေါ့ပျက်ပျက် ဘ၀ ထဲမှာ
မာနတရားနဲ့မင်းရဲ.သိက္ခာ ကို
ထိန်းနိူင်ကြောင်း ပြော ပြန်...............
ငါ့ကို ချစ်လျချည်ရဲ. ဆို ပြန်....
မင်းပြောတော့ မင်းရဲ့ မောင်လေး
ယောက်ကျား တယောက် က
ကိုယ့်မာန ကို မလျော့ ဘူးဆိုတာ
မသိချင် နေ တာလား...
ဒါမဟုတ်............စစ်မက် ဖန်တီးနေတာ လား..........
မင်း က တစ်ခါတစ်လေ
လူယဉ်ကျေး တွေကို ဟားတိုက်တယ်..
ငါ အင်္ကျီ မ၀တ် တော့
မင်းပြောတဲ့ ကမ္ဘာ ကြီး ကြီး မြတ် ကြောင်း ကြားတော့
ငါ အချိန်တွေ ရပ်တန်.ထားချင်တယ်...
သိပ်မကြာခင် အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ လော က ကြီး အကြောင်း
ကြားရ မှာ မို့ .................................
မင်းကို ရင်မခုန် တော့ဘူး ဆိုပေမယ့်
မင်းကို လည်ပင်း ညစ်သတ်ချင် လောက်အောင်
Posted by ဒီးဒိုး at 8:45 AM No comments:
နှစ်ယောက်လုံး ရဲ. အပြစ်............
သုံးခါ မြောက်မှားတဲ့အ ခါ.........
လုံးဝ ငါ့ ရဲ.အ ပြစ်......................
အခါခါ ပေါင်း များစွာ
အပြစ်တွေ ကျူးလွန် ဖို. ထပ်စောင့်..........
အရူးလို. ပြောချင် ပြော
ငကြောင်လို. ခေါ် ချင် ခေါ်
အကြိမ်ကြိမ် သေခွင့် စောင့်နေ သူပါ.......
Posted by ဒီးဒိုး at 8:42 AM 1 comment:
Posted by ဒီးဒိုး at 5:42 AM No comments:
ရင်ထဲ က လွမ်းနေရတယ်....
ပေါင်းဖက် မနီး တဲ့ တောင်းတ ခြင်းရဲ.
ဟောင်းပြီးခဲ့ တဲ့အတိတ် ဇာတ်ကြောင်းရယ်
အလွမ်းတွေ ဘယ်ဆီ က
ရောက်လာတယ် ငါ မသိ.....
ဝေဒနာတွေ ရင် ထဲရောက်ပြီ....
ချစ်ခဲ့ မိသမျှ အပြစ်ရှိ ခဲ့ရ
ခြားနားခြင်း များ ငါ နားမလည်
အမှား တွေ မြင်ခါ မှ
ဝေဒနာတွေ ထပ်တွေ.ရ ပြန်တယ်
Posted by ဒီးဒိုး at 10:02 AM No comments:
မင်း လျှောက်မယ် ဆို ရင်
ငါပာာ မင်းအတွက် အဝေးပြေး လမ်း မ ကြီး ပေါ့...ချစ်သူ.....
မင်းမလို ရင် ထွက်သွား နိုင် ဖို.
ငါ့ ရဲ.အ လွမ်းတွေ ခင်းထားတယ်..........
မင်းလိုရင် ပြန် လာနိုင်ဖို.
ငါ့ရဲ.ဘ၀ တစ်ခုလုံး ခင်းထားပြန်တယ်......
ဒီ လမ်းပေါ်မှာ
ယောက်ကျား တစ်ယောက် ရဲ.
အတ္တ မာန အဖုအထစ်တွေ မရှိဘူး
ဟန်ဆောင် ချိုင့်ခွက်တွေ မရှိဘူး
ကာရံ တတိုင်းတွေ မရှိဘူး
အချိန်မရွေး မင်းရပ်နား နိုင်ဖို.
.......ပြန်လာ ခဲ့ ပါ ချစ်သူရယ်...
Posted by ဒီးဒိုး at 10:00 AM No comments:
'''''တူညီခြင်း....ရဲ.တူညီ ခြင်း.......ညီမျှခြင်း ရဲ. ညီမျှခြင်း.......... . . .'''''''
ဘယ်သူ လှ လို. ကျည်းတန်
အရှက် ကြီး နည်း
ကြင်နာခွင့် ရ ရင်
အရှက်ကြီး ပြီး နည်း လဲ
ဘယ်လို သိနိုင်မှာ လည်း
Posted by ဒီးဒိုး at 8:11 AM No comments:
Posted by ဒီးဒိုး at 9:22 AM No comments: